OTU ESI EMEZI IHE IKPEAZỤ N'IME OKWU - OKWU - 2019
Wepụ ihe ikpeazụ n'ime okwu Microsoft
Ọ dị mkpa iji mee ka ndị ọhụrụ na-ekiri gị ọwa. Ị nwere ike ịjụ ha ka ha denye aha na vidiyo gị, mana ọtụtụ ndị na-achọpụta na na mgbakwunye na arịrịọ dị otú ahụ, enwerekwa bọtịnụ anya nke na-egosi na njedebe ma ọ bụ mmalite nke vidiyo. Ka anyị lebakwuo anya na usoro maka imewe ya.
Idenye aha na vidiyo gị
Na mbụ, ọ nwere ike ịmepụta bọtịnụ dị n'ọtụtụ ụzọ, mana e wepụtara mmelite na May 2, 2017, bụ ebe nkwado nkwado kwụsịrị, mana arụmọrụ nke ikuku ikpeazụ ka mma, na-eme ka o kwe omume ịmepụta bọtịnụ a. Ka anyị nyochaa usoro a site na nkwụsị:
Banye na akaụntụ YouTube ma gaa na ụlọ ihe okike site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị, nke ga-apụta mgbe ị pịrị na profaịlụ profaịlụ gị.
Na menu na aka ekpe, họta ihe "Onye nchịkọta vidiyo"iji gaa ndepụta vidiyo gị.
Ị nwere ike ịhụ n'ihu gị ndepụta na vidiyo gị. Chọta ihe ị chọrọ, pịa akụ na-esote ya wee họrọ "Ikpochapụ na Nkọwa Ikpeazụ".
Ugbu a ị na-ahụ onye nchịkọta vidiyo n'ihu gị. Ikwesiri ịhọrọ "Tinye ihe"na mgbe ahụ "Ịdenye aha".
Akara akara nke gi ga-egosi na vidiyo vidiyo. Bugharịa ya na akụkụ ọ bụla nke ihuenyo ahụ.
N'okpuru, na usoro iheomume, ihe mmịfe na aha nke ọwa gị ga-apụta ugbu a, kwaga ya n'aka ekpe ma ọ bụ aka nri iji gosipụta mmalite oge na njedebe oge maka akara ngosi ahụ na vidiyo.
Ugbu a, ị nwere ike itinye ihe ndị ọzọ na ntanetị ikpeazụ, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na na njedebe nke edezi, pịa "Chekwa"ime mgbanwe.
Biko mara na ị gaghị ejiri bọtịnụ a mee ihe ọ bụla ọzọ, ma ọ bụghị iji kpalie ya. Ikekwe na mmelite n'ọdịnihu anyị ga-ahụ nhọrọ ndị ọzọ maka bọtịnụ "Ịdenye aha", ma ugbu a, anyị ga-enwe afọ ojuju n'ihe anyị nwere.
Ugbu a, ndị ọrụ na-ekiri vidiyo gị nwere ike ịkwado akara ngosi ọwa gị iji denye aha ozugbo. I nwekwara ike ịmatakwu banyere ebe nchekwa nchekwa ahụ iji tinyekwuo ozi na ndị na-ekiri gị.